Predator Triton 300: Acer laptop-kiisa cusub ee ciyaaraha fudud | Wararka Gadget
Acer wuxuu nooga tagayaa warar dheeri ah soo bandhigiddeeda IFA 2019. Shirkaddu waxay soo bandhigtay laptop-keeda cusub ee ciyaaraha, qoyskeeda ka mid ah aaladaha loo yaqaan 'Predator'. Xaaladdan oo kale waa Predator Triton 300, taas oo loo soo bandhigo sida laptop awood badan leh, laakiin aad u fudud. Isku-darka ka dhigaya mid ku habboon marka ay timaaddo in meel walba nala raro.
Waxaa loo soo bandhigay sidii moodal milan, kaas oo na siin doona waxqabad weyn. Sidoo kale, ha ilaawin in Acer uu yahay mid ka mid ah noocyada ugu caansan qaybtan suuqan. Predator Triton 300 waa xulasho wanaagsan in lagu xisaabtamo arimahan. Waxaan horeyba u ogaanay wax walba oo ku saabsan.
2 Predator Triton 500 hadda waa la heli karaa
Predator Triton 300 waa nuuca ugu cusub noocyada Triton, oo leh Windows 10 oo ah nidaamkeeda hawlgalka. Waa tusaale yaqaan sida loo si fiican isugu daro waxqabadka iyo shaqeynta a naqshad caato ah, xiiso leh oo aad u soo jiidasho leh. Culeyskiisu waa 2.3 kg oo keliya, taas oo ka dhigaysa mid aad u fudud marka loo eego moodooyinka kale ee maanta yaalla suuqa. Sidii caadada u ahayd baaxaddaan, waxay ku timaadaa dhar madow oo madow oo madow leh iftiin buluug ah iyo iftiin.
Shaashadda laptop-kan cusub ee ciyaaraha ee Acer wuxuu leeyahay cabir dhan 15,6 inji. Waa shaashad leh xallinta Full HD, oo lagu sameeyay guddiga IPS. Waxay na siineysaa heer cabir ah oo ah 144 Hz iyo waqtiga jawaab celinta ee 3 ms, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan helno khibrada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah markaan la ciyaareyno.
Qaabkani wuxuu adeegsanayaa a 7-jiilka Intel Core i9 processor-ka gudaha, kaas oo ku lammaan NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU iyo 16GB oo ah 4Hz DDR2666 Memory (oo lagu ballaadhin karo 32GB). Si dadka isticmaala ay ugu helaan meesha ugu badan ee lagu keydin karo, Acer wuxuu xaqiijinayaa in Predator Triton 300 uu taageero siinayo ilaa labo 1 TB PCIe NVMe SSDs ah oo ku jira RAID 0 iyo ilaa 2 TB adag. Sidoo kale, waxaa la xaqiijiyey in Killer Wi-Fi 6 AX 1650 lagu dhex daray Killer Ethernet.
Maqalka, shirkadu waxay isticmaashay Waves Nx. Dhanka kale, Kumbuyuutarka kumbuyuutarka wuxuu ka kooban yahay iftiinka RGB by aagag iyo u heellan furayaasha Turbo iyo Predator Sense, laba cunsur oo muhiim u ah buugaagta lagu qoro ciyaaraha maanta. Astaantu waxay rabtay inay ilaaliso naqshadeynta kuleylka ka sarreeya ee laga helo dhammaan kombuyuutarrada gacanta ee ku jira inta u dhexeysa Predator. Tan waxaa sidoo kale ka mid ah laba taageere oo leh Acer jiilka 3aad ee AeroBlade 4D tiknoolajiyadda biraha, tiknoolajiyada CoolBoost, iyo istaraatiijiyad ahaan loo dhigay hawo qaadashada iyo qiiqa hawada.
Predator Triton 500 hadda waa la heli karaa
Predator Triton 300 maahan waxa kaliya ee noocan ah. Acer ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay dhacdadan IFA 2019 Predator Triton 500, oo ah nooc kale oo isla kombuyuutarrada lagu ciyaaro ah. Waxaa loo soo bandhigay qaab kale oo awood leh, oo leh waxqabad wanaagsan, laakiin taasi waa mid fudud oo dhuuban. Kiiskan waa kaliya 17,9mm qaro weyn miisaankiisuna yahay 2.1 kg. Waxay ka dhigeysaa gaadiidkaaga mid aad u raaxo leh markasta.
Qaabkaan Acer wuxuu leeyahay shaashad cusbooneysiin ah. adoo adeegsanaya shaashad HD buuxda waa 15,6 inji, taas oo ku faaneysa heer cusbooneysiin 300Hz ah.waxaa loogu talagalay alwaax dhan bir ah oo leh fiilooyin cidhiidhi ah oo kaliya 6,3mm si loo gaarsiiyo saamiga 81% jiifka-shaashadda. Processor-ka, wuxuu adeegsadaa jiilka 7-aad ee Intel Core i9, si markaa uu noo siin doono awood aad u weyn marwalba, taas oo u oggolaaneysa inay noqoto laptop awood badan leh.
Acer wuxuu xaqiijiyay in labadan laptop-yada cusub ee ciyaaraha ay si rasmi ah aduunka oo dhan uga iibin doonaan dayrta. Kuwa xiiseynaya iibsashada Predator Triton 300, waxaa lagu dhawaaqay in la heli karo laga bilaabo Oktoobar qiimo dhan 1.299 euro. Dhinaca kale, kuwa doonaya inay iibsadaan Acer Predator Triton 500 waa inay sugaan illaa Nofeembar, markaas oo ay ku imaaneyso qiime dhan 2.699 euro
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Predator Triton 300: Acer laptop-kiisa cusub ee ciyaaraha